साउदीमा एक हप्तामा १५ हजारबढी आप्रबासी कामदार पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा नेपाली र बाङ्लादेशी धेरै ! - ramechhapkhabar.com
साउदीमा एक हप्तामा १५ हजारबढी आप्रबासी कामदार पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा नेपाली र बाङ्लादेशी धेरै !
यी मध्ये १७ जना अबैध आप्रबासी कामदारलाई सहयोग र संरक्षण गर्नेहरू पनि रहेको मन्त्रालयलाई उद्रित गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ। यी सबैलाई सजाय तथा कानुनी प्रकृया पुर्याएर देश निकाला गरिने जनाएको छ । कुल ८८ हजार २९ उल्लङ्घनकर्ताहरू अहिले नियम उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियाको अधिनमा छन्, जसमध्ये ७८ हजार ६८७ पुरुष र ९ हजार ३४२ महिला रहेको जनाएको छ ।
खबर हब बाट